Pokémon Rumble Rush bụ otu ọzọ gacha, ma na Pokémon | Gam akporosis
Nintendo's Pokémon Rumble Rush bịara ụnyaahụ na ọ na-aghọ gacha ọzọ na-adọrọ mmasị nke na-agafe n'aka anyị, ọ bụ ezie na uto ahụ na-adịghị mma hapụrụ mgbe anyị hụrụ na ụlọ ọrụ akụkọ ifo ọzọ dara maka freemium, igbe mkpọtụ na egwuregwu ahụ nke ohere na-adịgide adịgide na Google Play.
Bụrụ na ọ nwere ike, anyị nwere egwuregwu Nintendo ọzọ na ndị Pokémon ahụ nwere ọtụtụ nde ndị na-eso ụzọ n'ụwa niile. O doro anya na ọ ga-abụ egwuregwu ebudatara hyper na karịa mgbe anyị nwere ike ịga ịchụ nta maka ndị Pokémon na ịdị mfe na ọ pụtara inwe ike igwu egwu naanị otu aka, ebe anyị na-eche usoro nhazi.
1 Gacha, gacha na ndị ọzọ gacha
2 Ihe omimi di omimi na Pokémon Rumble Rush
3 Nke ahụ ...
Gacha, gacha na ndị ọzọ gacha
Ya Nintendo wesara iwe na ọmụmụ ihe ndị ahụ nke ọ na-ejikọ ọnụ maka gịnị lekwasịkwu anya na egwuregwu karịa ịnwa ịchụ ego karia ma oburu na egwuregwu dabara. Ihe dị iche na anyị bụ na egwuregwu nke Pokémon Rumble Rush dị mfe ma mgbe ụfọdụ ọ na-ewute ịhụ na Pokémon iri ari; nakwa na ọ bụrụgodị na anyị na-eme swipes ka ọ na-aga n'ihu.
Usoro dị mfe nke anyị anaghị etinye aka na ọgụ, ebe ọ bụ na otu n'ime mmegharị ole na ole anyị nwere, ewezuga ịmechi ihuenyo ugboro ugboro Uncekwanye na ndị iro dị iche iche na-abịakwasị anyị, ọ ga-abụ swipe na-agbalị "zere" na ha kụrụ anyị mgbe ụfọdụ.
Pokémon Rumble Rush bụ egwuregwu nwere mmetụ aka anyị nwere chịkọta Pokémon niile anyị nwere ike na nke anyị ga-eche ihu na-achọ ha site na maapụ nke ọtụtụ ma ọ bụ obere, ọkwa anyị na-ezo aka, bụ naanị otu. Ọnọdụ ahụ gbanwere, mana omume ahụ bụ otu: Pokémon ole na ole na-awakpo anyị ka anyị gaa Pokémon kachasị ukwuu nke ga-achọ ihe ga-eme ka iwepụ ya.
Ihe omimi di omimi na Pokémon Rumble Rush
Ọ bụ ezie na ekwesịrị ikwu na opekata mpe ha arụ ọrụ wetara anyi ihe di omimi nke ahụ ga-agbanwe kwa izu abụọ. Nke ahụ bụ, agwaetiti na oké osimiri nke anyị ga-agagharị ga-agbanwe. Ọ ga-abụ n'àgwàetiti ndị ahụ na oké osimiri ebe anyị ga-ahụ Pokémon amaghi na nke a bụ ebe otu n'ime ihe kachasị mma nke egwuregwu a na-abata na nke ahụ bụ ihe ndabere nke Niantic's Pokémon GO.
Ga-enwe ohere nke inwe ike imeziwanye Pokémon cna mineral anyị na-enweta na usoro. Site na nkwekọrịta anyị nwere ike ịnweta ihe ndị ahụ iji melite Pokémon anyị. N'otu oge ahụ, anyị ga-enwe ikike nke ndị enyi ịkpọ Pokémon siri ike karị nke ga-enwe ike iji mmegharị nke ike na mmetụta ka ukwuu.
Ohere ọzọ anyi nwere igosiputaAnyị bara uru ga-eso ndị isi Super, ọ bụ ezie na iji nwee ike ihu ha, anyị ga-enwerịrị ọtụtụ ụdị Pokémon. Ebumnuche ọzọ nke Polọ ọrụ Pokemon nyere anyị na gacha nkịtị a ga-egwu ọtụtụ puku ndị egwuregwu gburugburu ụwa.
Nke ahụ ...
O siri ike ghọta na freemium na egwuregwu ndị na-ebu akara Nintendo. Na ndị ọzọ mgbe anyị chọpụtara na A gaghị ebipụta egwuregwu abụọ ya na Google Play Store na Belgium. Ee, n'ihi ịgba chaa chaa na otu igbe igbe ndị ahụ na-ebu sistemụ na-achọ ihe riri ahụ nke ndị na-egwu ha ... Ka anyị nwee olileanya na ọtụtụ mba sonyere Belgium ma jikwaa ịgbanwe ọdachi ahụ ụlọ ọrụ na-egwu egwuregwu na-ewere. ; ọbụna Blizzard agbaala ...
Teknụzụ ọ bụ egwuregwu dị ezigbo mma yana eserese dị mma yana mmetụta dị egwu na-achịkwa iji kpalie egwuregwu ọ bụla. Anyị na-atụ uche karịa mgbagwoju anya na ọkwa, ebe ọ bụ na ha bụ nnọọ monotonous, na na na ada ụda dị nnọọ iche na egwuregwu na Nintendo akara; ma ọ bụrụ na ha achọpụtabeghị maka ihe ọzọ, ọ na-abụrịrị n'ihi ihe mbụ na ike ịmepụta àgwà egwuregwu. Da ahụ bụkwa ihe na-adịghị fu ma ọ bụ fa, yabụ ka anyị nwee olileanya na ha ga-arụ ọrụ ya karịa na Mario Kart Tour, n'agbanyeghị ịbụ ugwo zuru oke iji merie (ugwo iji merie), anyi na-atu egwu kacha njọ.
Un Egwuregwu ọhụrụ Nintendo na Pokémon akpọ Pokémon Rumble Rush na nke ahụ na - esonye n'ọtụtụ porridge na Playlọ Ahịa Google nke na - achọghị ihe ọ bụla ọzọ karịa inweta ego gị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na a ga - enwerịrị whale na - adọta kaadị iji nwee ọganihu ngwa ngwa ka ị na - eji oge nke ndụ gị dị ka ego nke mgbanwe.
Inwe ike ichu nta Pokémon
Na-agwụ ike gameplay
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Pokémon Rumble Rush nyochaa: ọzọ gacha, ma oge a site na Nintendo